Iimephu zikaGoogle ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye ukhuphele imifanekiso eqokelelweyo-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/IGoogle Maps ungaxhunyiwe kwi-intanethi uze ulandele imifanekiso ekhoyo
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISGoogle umhlaba / imephu
Zimbalwa iindlela ezizezinye eziye zaphuma ukuze kuqinisekiswe ukuba idatha yokukhangela kuGoogle igcinwe kwindawo yokugcina izinto ukuze kuboniswane nayo xa singaxhunyiwe kwi-Intanethi. Nangona iGoogle Earth ngokwayo igcina, akuqinisekanga ukuba igcinwe phi, njengokuyidlulisela kwenye idiski okanye ukuyigcina kwimeko apho sifaka ingxelo entsha yesikhangeli okanye ukufomatha umatshini.
Okwangoku StitchMaps kuye yokuveza imifanekiso uzilayishe ezantsi, kodwa ezinye ngembobo zayimosaic georeferenced engazange yenziwe kulo mzekelo abangela ukuba ulayishwe ezantsi kwaye zithwele zibe ArcGIS kunye namanqanaba ahlukeneyo isikali.
Ezi zisombululo zimbini ndizokuzichaza zinomdla, nangona zingasebenzi noGoogle Earth kodwa ziMephu zikaGoogle, kodwa ziyindlela eyongayo kwezo njongo zokukwazi ukugcina idatha yokuhamba ngendlela elawulwayo okanye ukuyilayisha kwiArcGIS kwinqanaba elahlukileyo lendlela. Zombini zenziwe yinkampani I-Offline Soft.
Esi sisikhangeli esinamandla kakhulu, esikuvumela ukuba ujonge kwangaxeshanye imephu kunye nongqameko lomfanekiso. Kodwa eyona nto inomdla kukuba itekhnoloji yayo ivumela iindawo apho kuye kwahanjwa khona ukuze zigcinwe, kwifolda esinokukhetha kuyo.
Ngale ndlela, ulwazi lunokuphinda luqwalaselwe kwanaxa kungekho qhagamshelo kwaye njengendawo yokugcina indawo efihlakeleyo, indlela yomncedisi inokukhethwa ukuze bonke abasebenzisi bakwazi ukudibana nale datha ngaphandle kokusebenzisa ikhonkco kwi-Intanethi. Kananjalo le folda inokudluliselwa komnye umatshini ...
Enye into enomdla kukuba iindawo zingagcinwa njengezithebhu, ngoko kunokwenzeka ukubona iifestile ezahlukeneyo ngaphandle kokuhamba kwindawo nganye.
I $ 29.95 Ndiyifumana utsalo-mali othakazelisayo, inguqu yesilingo inokulayishwa ukuba ingathengi into esingazange sizame.
Apha ungayilanda inguqu yesilingo seMephu View.
Ukuthumela ngaphandle kwemephu luphuhliso olujolise kwi-GIS, njengoko ivumela ukukhuphela nokuthumela imifanekiso kwiGoogle Maps kwimephu ye-mosaic. Kuhlala kunokwenzeka ukukhetha phakathi kweGoogle Satelite Izithombe, iimephu zetrato kunye neTerrain.
Kodwa masibone oko kukukhuphelayo okukukhokelela kwi-GIS:
1. Kuthotywa umthwalo wemifanekiso
Imephu yokuthumela ngaphandle inokukhuphela imifanekiso enemifanekiso kwifolda esinokukhetha kuyo. Kuyenzeka ukuba ukhethe uququzelelo lwefestile yokukhuphela, ngesandla okanye ngefestile emephini. Unokukhetha kwakhona uhlobo loomaleko, emva koko iphaneli esezantsi ibonisa ukhuphelo, inani lemifanekiso kunye nolawulo lokumisa okanye ukuphinda uqalise ukhuphelo.
Kuyathakazelisa ukuba lo mlawuli wokukhuphela angenza imisebenzi eyahlukeneyo isebenze ngexesha elifanayo, unokuqwalasela ukudibanisa, apho ukuba uxhumo luyahla, xa ubuya ngokukhawuleza ukukhuphela kwakhona ukukhuphela.
2. Amanqanaba ahlukeneyo endlela
Iphaneli elungileyo livumela i-18 ukulanda amanqanaba ahlukeneyo endlela, kwaye nganye yazo idala ifolda kunye nemifanekiso yemifanekiso.
Kule meko, ndikhethile iinqanaba ze-5, nge-jpg imifanekiso, njengoko ubonayo, ndadala ifayile ye-jwg ukuze xa bebiza kwiprogram ye-mapping bafika georeferenced.
Kuyenzeka ukuba ukhethe iifom ze-omp, jpg, gif, png kunye ne-bmp. Oku kusebenza kwamanqanaba ahlukeneyo esikalini kwenza ukuba kubengcono kune Yenza iMaphuEvumela kuphela phantsi inqanaba elinye ngexesha, yaye loo amagqabi phantsi georeference, isibakala sokuba bahlanganisane ukuze omnye kwenza ulahlekelwa uzinzo phakathi komgangatho wokwandisa eyahlukileyo ifayile yongqanianiso calibrates kuphela kungqameko engaphandle.
Inguqu yesilingo iyakwazi ukukhuphela imifanekiso ukuya kwizinga le-11, ngokuphakama ngokulinganiselwa kwe-80 mts.
Yenza oku nge-Google Earth Enterprise kodwa phantsi kweemigangatho ze-Google eziphambukayo, ngokwenza oku ngeMephu yokuThengisa kungenzeka ukuba wenze isakhelo sakho somfanekiso usebenzisa idatha ye-Google.
3. Uvimba weArcGIS
Ukuze nokulayisha ezantsi imifanekiso uze ukhethe i "ziquka ESRI ifayile ihlabathi" khetho kudala ifayile XML nophethe ithayile ukuba lolayisho evela ArcGIS, ngenxa yokuba ukuba uyaqaphela, ifayile equlathe ezayo imifanekiso kunye nabalawuli apho zigcinwa khona imifanekiso isikali eyahlukileyo.
Imephu Export ibonakala kum isisombululo esihle kakhulu sokukhuphela imephu ukusuka kwiGoogle Maps, isetyenziswe kakuhle ixabiso njengotyalo-mali.
Apha unako ukukhuphela inguqu yesilingo Imephu yokuthumela.
Ukufumana ulwazi oluninzi ungabonisana nephepha OfflineSoft.
Iiplate ze-tectonic kwiGoogle Earth
Ndifuna ukukhuphela indawo enkulu ye-goart eart ukuze uyivule kwiprogram ye-mapinfo. kuya kuba sisiseko sokudala imizila yemizila yeefowuni. Ukongezwa okuphakamisa imephu yi-ecw. enokuyenza kum mbuliso
Ewe, yilokho i-MapExport.
Unokwenza njalo nge-AutoCAD + Plex.Earth okanye ngeStchmaps kwiGoogle Earth.
Edgar Padrón uthi:
Ndifuna ukukhuphela imifanekiso kwiMephu kaGoogle yommandla waseVenezuela ... ndiyayibona ngeGoogle Pro kodwa ndifuna ukuyikhuphela njengemifanekiso yemifanekiso ehlaziyiweyo ... Enkosi
Ukuba ulanda imifanekiso, umzekelo kwi-jpg format, akukho namnye kubo onokwenza izinto. Ngoko ukuba iArcview izitangatye ziya kuhlaselwa kwindawo efanayo, kufuneka ulungelelanise ngamnye.
Ukuzama ukuqonda isicelo sakho, ndincoma ukuba usebenzise inkqubo yeStchmaps ukulanda umfanekiso, ngaphakathi esi sithuba Wathetha ngawo.
Into endiyifunayo kukukhuphela umfanekiso wendawo ethile kwaye ndikwazi ukuyivula kumbono we-arc, ungandinceda ngale….
Uxolo ngombuzo, ndiyinkosana, ndifuna ukukhuphela i-mosicos kwiGoogle esrth kwaye xa ndibakhangela kwindawo endiya kuyo, ndibanike njengokukhuphela.
I-Google ayithengisi i-orthophoto
ukusebenza kwindawo ye-cadastre ungathanda ukwazi ukuba i-gogle ithengisa i-orthophotos kunye neendleko zayo
Idatha yeeart yeGoogle ichanile ngakumbi kuneemephu ze-orthophoto
ulwazi luhle kakhulu ... enkosi ... ndicinga ukuba ndiza kuthatha ukhetho lwesibini
Yintoni yokuqala, i-cadastre okanye i-Ordinance Territorial?